गर्भावस्था र खतराका लक्षणहरु - प्रशासन प्रशासन
प्रकाशित मिति : 8 July, 2019 8:00 am
गर्भावस्था हरेक महिलाको लागि आमा बन्ने सौभाग्य हो भने परिवारमा नयाँ सन्तान र खुसी ल्याउने भविष्य हो । गर्भावस्था प्रत्येक महिलाको लागि एक विशेष र जोखिमपूर्ण अवस्था पनि हो । एक महिलाले स्वस्थ बच्चाको जन्म दिन उनी किशोरावस्थादेखिनै स्वस्थ रहन जरुरी छ । गर्भधारण गरेपछि महिला आफू स्वस्थ रही स्वस्थ बच्चालाई जन्म दिन गर्भ परीक्षण, गर्भ स्याहार, सरसफाइ र खानपानमा ध्यान दिनुपर्छ ।
गर्भ जाँच कहिले र कति पटक गर्ने ?
गर्भवती महिलाले कम्तीमा चार पटक र आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा गई जाँच गराउनु पर्दछ ।
पहिलो पटक: महिलाले आफू गर्भवती भएको थाहा पाउनासाथ अथवा ४ महिनामा जँचाउनु पर्छ, यसले महिला गर्भवती भएको निधो गर्न र अरू समस्याहरू छैन भनेर जानकारी पाउन मद्दत गर्दछ ।
दाश्रो पटक: गर्भवती भएको ६ महिनामा जाँच गर्दा महिलाको स्वास्थ्य अवस्था र गर्भमा रहेको शिशुको वृद्धि कस्तो छ थाहा पाउन सकिन्छ ।
तेस्रो पटक: महिला गर्भवती भएको ८ महिनामा अथवा ३२ हप्तामा
चौथो पटक: गर्भवती भएको ९ महिनामा वा ३६ हप्तामा शिशुको अवस्था तथा शिशु गर्भमा कसरी बसेको छ (साधारण/असाधारण वा उल्टो\_सुल्टो) पत्ता लगाउन परीक्षण गर्नुपर्छ ।
यदि साधारण अवस्थामा छैन भने दक्ष प्रसूतिकर्मी वा डक्टरसँग समयमानै सल्लाह लिई प्रसूति गराउनको लागि अस्पताल जानुपर्छ ।
गर्भावस्थामा महिलाले निम्न लिखित कुराहरूको परीक्षण गराउनुपर्छ
रक्तचापको (ब्लड प्रेसर) परीक्षण
रगतको परीक्षण अन्तर्गत हेमोग्लोबिन(रक्तअल्पता छ वा छैन पत्ता लगाउन गरिन्छ), ब्लड ग्रुपिङ्ग, भि.डी.आर.एल.(यौन रोग पत्ता लगाउन), एच.आइ.भि.जाँच र एचबिएसएजी (कलेजोको सङ्क्रमण पत्ता लगाउन गरिन्छ)
रगत परीक्षणबाट आमाको स्वास्थ्य अवस्था थाहा पाइ असाधारण भए समयमानै उपचार गर्न सकिन्छ साथै बच्चालाई आमाबाट बच्चामा सर्न सक्ने रोगहरूबाट बेलैमा बचाउन सकिन्छ ।
बच्चाको अवस्था पत्ता लगाउन २४ हप्ता भित्र एक पटक यु.एस.जी.(अल्ट्रासोनोग्राफी) गराउने र आवश्यकता भए स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार गर्ने ।
गर्भवती भएको ४ महिना पछि एक पटक जुकाको औषधी अनिवार्य खाने जुन स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाउँछ ।
गर्भवती भएको ४ महिना लागेपछी सुत्केरी भएको ६ हप्ता सम्म प्रत्येक दिन आइरन फोलेट चक्की खानुपर्छ र यो नेपाल सरकारले स्वास्थ्य संस्था मार्फत निःशुल्क वितरण गर्छ ।
टि डि (टिटानस टक्साइ, डिप्थेरिया) इन्जेक्सन दुइपटक लिनुपर्छ, एउटा पहिलो पटक गर्भवती भएको थाहा पाउन साथ र दाश्रो त्यसको एक महिनाको अवधिमा, तर त्यो नौं महिना पुग्नु भन्दा अगाडी हुनुपर्छ टि डी खोप पनि स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाउँछ ।
गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका चिन्हहरू (Danger Sign in pregnancy)
गर्भावस्थामा केही महिलाहरूमा जोखिमपूर्ण सङ्केतहरू देखिन सक्छन् । खतराका चिन्हहरू भन्नाले त्यस्ता चिन्हलाई जनाउँछ जसले समयमै उपचार नभए जीवनलाई गम्भीर जोखिमको अवस्थामा पु¥याउछ अथवा आमाको मृत्यु पनि हुन सक्दछ । निम्न लिखित समस्याहरू मध्ये कुनै एक मात्र देखिए पनि गर्भवती आमा तथा उनको परिवार सजग रहनुपर्छ र तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा उपचारको लागि जानुपर्छ ।
माथि उल्लिखित खतराका लक्ष्णहरु मध्ये केही लक्ष्णहरु प्रसूति पश्चात् पनि देखिन सक्छन् ।जस्तै: प्रसूति पश्चात् अत्यधिक रक्तश्राव हुनु, धेरै टाउको दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देख्नु, रिँगटा लाग्नु तथा मुर्छा पर्नु र धेरै ज्वरो आउनु । प्रसूति पछि आउन सक्ने यस्ता समस्याहरूले पनि आमाको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ र समयमा उपचमर नगरे ज्यान समेत जान सक्दछ ।
आमा स्वस्थ रही स्वस्थ बच्चाको जन्म दिनको लागि र जोखिमपूर्ण समस्याहरूबाट बच्न गर्भवती महिलाले नियमित स्वास्थ्य संस्थामा गई गर्भ जाँच गराउन महत्त्वपूर्ण छ । साथै माथि उल्लिखित खतराका लक्ष्णहरु देखिन बित्तिकै तुरुन्तै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गर्न जरुरी छ ।
22 February, 2020 8:22 am
कोरोना भाइरस : इटालीमा एकको मृत्यु, मृतकको संख्या २३६० पुग्यो
बेइजिङ । युरोपेली मुलुक इटालीमा कोरोना भाइरसका कारण शुक्रबार एक
वुहान । चीनको कोरोनाभाइरस प्रकोपको केन्द्रबिन्दु वुहानमा रहेको एउटा कारखानालाई
20 February, 2020 5:12 pm
स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशकमा महेन्द्र श्रेष्ठ, ट्रमा सेन्टरमा पौडेल
काठमाडौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागको निमित्त महानिर्देशकमा महेन्द्र श्रेष्ठलाई पठाइएको